Anyị na-egosi gị otu esi agbanwe mkpụrụedemede na gam akporo na-enweghị / na mgbọrọgwụ | Akụkọ akụrụngwa
Otu n'ime ohere anyị nwere mgbe anyị na-ejikwa sistemụ arụmọrụ gam akporo bụ nhazi nke mkpụrụ edemede na-egosi na SO. Anyị nwere ike inye ekwentị anyị aka ọzọ na ụdị font ọzọ na-adọrọ mmasị na agwa anyị ma na-aga ntakịrị na nkịtị na gam akporo, ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ọdịiche ọ na-esiri ike ịnwe ihe guzobere na sistemụ arụmọrụ a n'ihi otu mfe ọ bụ hazie ya dịka anyị chọrọ.
Ọ bụ ezie na mgbọrọgwụ anyị nwere ike itinyekwu aka na sistemụI nwekwara ike igbanwe sistemụ sistemụ na enweghị enweghị ikike mgbọrọgwụ, mana ee, anyị agaghị enwe ọtụtụ ohere ma a bịa n'ịhazi ya nke ọma. Ọzọ anyị ga-egosi gị ụzọ abụọ, otu nwere ikike mgbọrọgwụ na nke ọzọ na-enweghị mgbọrọgwụ.
1 Esi gbanwee mkpụrụedemede na gam akporo na-enweghị mgbọrọgwụ
1.1 Site na Samsung ngwaọrụ
1.2 Site na ngwaọrụ LG
1.3 Site na ngwaọrụ ọzọ karịa Samsung ma ọ bụ LG
2 Esi gbanwee mkpụrụedemede na gam akporo na mgbọrọgwụ
2.1 Nke mbụ
2.2 Nke abụọ
Esi gbanwee mkpụrụedemede na gam akporo na-enweghị mgbọrọgwụ
Site na Samsung ngwaọrụ
Ka anyị were dị ka ihe atụ a Samsung ngwaọrụ na-na-na-họọrọ site gam akporo ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ Korea na-enye ohere ịgbanwe font na Samsung ngwaọrụ na-enweghị mkpa inwe mgbọrọgwụ.
Ga-aga ntọala> Gosiputa> Font> Fdị ụdị
Họrọ nke ọ bụla n’ime ndị nọ ya.
Nwekwara ike ịhọrọ akara ọzọ site na nchịkọta na Samsung App Store
Site na ngwaọrụ LG
LG na-enye gị ohere ịgbanwe sistemụ font na ụzọ ime ya bụ otu ihe ahụ dị ka site na Samsung ngwaọrụ. I nwekwara ike ịga na SmartWorld ụlọ ahịa ha ka ibudata ụfọdụ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ akwụ ụgwọ.
Site na ngwaọrụ ọzọ karịa Samsung ma ọ bụ LG
Maka nke a ị ga- budata ngwa nke atọ dị ka Go Launcher Fonts, nke ga-abịa maka otu n'ime ndị na-ewu ewu na-ewu ewu dị ka Go Launcher. Cheta na oburu na ibudata font, I gha enyocha ihe edeputara ka ndi ibudatara gosi.
Esi gbanwee mkpụrụedemede na gam akporo na mgbọrọgwụ
Mee nkwado ndabere nke isi mmalite ndị ị nwere na ọnụ. Maka nke a, ịnwere ike ịwụnye Njikwa faili ASTRO na ozugbo na ngwa ahụ, ị ​​ga-l akara ngosi ekwentị dị na elu aka ekpe ịga na folda mgbọrọgwụ nke ngwaọrụ ahụ.
Ozugbo ị ruru ebe ahụ, gaa na sistemụ> mkpụrụ edemede> pịa akara ngosi nke dị ka ndepụta na elu wee kụọ gaa na akara ngosi menu atọ n'ala ala aka nri ma họrọ "họrọ niile".
Omiri isi mmalite ebe dị ka kọmputa gị, ọ bụrụ na ịchọrọ ya ọzọ.
Mgbe o mechara nkwado ndabere. Oge erugo budata nke ọ bụla nke mgbọrọgwụ ngwa nke ahụ ga-enyere gị aka ịgbanwe mkpụrụedemede. HiFont bụ otu n'ime ha.
Ozugbo ibudatara ya ma tinye ya, bido ya. Ga-anọrịrị tupu a ndepụta nke nyocha dị iche iche site na ụyọkọ isi mmalite ebe inwere ufodu na Spanish. Họrọ otu, pịa na ya, budata ya, nabata windo mmapụta, wee họrọ “ojiji” na ala aka ekpe.
Mgbe emechara ngwugwu ahụ, a ga-agwa gị ka ịmalitegharịa maka mgbanwe ndị a ga-etinye n'ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Esi gbanwee mkpụrụedemede na gam akporo ma ọ bụ na-enweghị mgbọrọgwụ
Akara Aka: sensations na-emegiderịta